Qiimaha alaabta ceeriinku way sii kordheysaa wayna sii socon doontaa
Dhawaan, Fujian qoryaha Linsen, East galay Hongye, Morgan Electronics, Hai Le Electronics iyo shirkado kale oo badan oo PCB ah ayaa sii deynaya ogeysiiska qiimaha guddiga PCB, ku dhowaad dhammaantood waxay kordhiyaan 10%.
Horraantii Julaay, Shandong Jinbao, Kingboard, Mingkang, gobolka Weili, Jin Anguo iyo dhowr shirkadood oo kale ayaa soo saaray naxaas, CCL iyo ogeysiisyo kale oo qiimo koror ah, kororka qiimaha bireedka naxaasta ah halkii tan oo ah 1000-2000 RMB, guddiga safafka leh ayaa kordhiyay 10RMB / kumbiyuutarada, muraayadda dahaarka ccl oo kor loo qaaday 5RMB / kumbiyuutarada, birta xaashida ah oo kor loo qaaday 5RMB / kumbiyuutarada.
Ogeysiiska qiimaha, saxanka, shaqada, kiimikada iyo kharashaadka kaleba waxay noqdeen seddexda arrimood ee kororka sicirkan. Xaqiiqdii, kororka sicirku waa qodob muhiim u ah xiriirka ka dhexeeya isbeddelada saadka iyo baahida. Caan ka noqoshada alaabada elektarooniga ah iyo kor u qaadista baahida suuqa terminal ayaa kordhay, kororka suuqyada yar yar ee korantada suuqyada ayaa kor u kacay, waxaana waday baahida guddiga PCB-lakabka badan.
Qalabka qaar ee muuqaalka LED-ka, sida guddiga PCB, armaajooyinka, iwm.
Qiimaha alaabta ceeriin waa dabaysha ilaa habeenkii, horaantii sanadkii hore, qalabka qaar ayaa bilaabay inay sare u qaadaan qiimaha. In kasta oo gobolku ku sugnaa dhinaca saadka ee dib-u-habeeynta, waxaa ka go'an in la hagaajiyo heerka faa'iidada shirkadaha warshadaha. Tani waxay ka dhigan tahay in qiimayaashu ay sii socon doonaan. Terminalka, kani waa war xun.
Qiimuhu wuxuu kaloo yeelan karaa darawal IC ah. Sida laga soo xigtay ilaha warshadaha, Epistar hadda jira ee bixinta xiisadda. Qiyaasta yar yar ayaa kobceysa, baahida suuqa ee xoogan kaliya lama keenin amarro iyo faa'iido, waxaa jira qulqulo joogto ah oo cadaadis alaab ceeriin ah.
Xogta gudaha waxay saadaalineysaa in xaalada saadka iyo baahida ay sii socon doonto ilaa sanadka dambe, taas oo micnaheedu yahay in mudo gaaban qiimaha ama uu sii socon doono.